Kaokazy: Firaisankina ao anatin’ny fahasamihafana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Desambra 2018 2:38 GMT
Vakio amin'ny teny Português, 简体中文, 繁體中文, বাংলা, Español, русский, English
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny fandrakofanay manokana momba ny Caucasus Conflict Voices (Feo momba ny ady ao Kaokazy). [lahatsoratra tamin'ny janoary 2010]
Tsopi: Manafana ny tanany ireo mpandray anjara Azeri sy Georgiana taorian'ny andro lava sady mangatsiaka nitateram-baovao tao amin'ny faritra Zeorzia © Onnik Krikorian / Oneworld Multimedia 2009
Amin'ireo ady telo tsy voavaha sy ny haino aman-jery ao an-toerana izay matetika maniva-tena, maneho hevitra momba ny tetikasa an-tserasera manantena ny hamotika ireo fitsarana an-tendrony amin'ny fitaterana ireo ohatra avy amin'ny vondrona ara-poko miara-miaina milamina ao anatin'ny fifandonana ao amin'ny faritra atsimon'i Kaokazy ny bilaogy. Noraisin'ny tonian-dahatsoratry ny Global Voices Online, Kaokazy an-tanana ny tetikasa, miaraka amin'ireo bilaogera sy mpanao gazety avy any Azerbaijan sy Georgia.
Nanomboka teo, ary lahatsoratra maromaro ao amin'ny Steady State an'ny Transitions Online, bilaogera hafa maro no naneho hevitra momba ny hetsika. Tamin'ny lahatsoratra lavalava iray, Ianyan, gazetiboky antserasera Armeniana miendrika bilaogy, nilaza fa ny vokatry ny tetikasa no antony hisian'ny fanantenana ao amin'ny faritra ravan'ny fahasamihafana ara-poko sy ny fahasamihafana ara-tantara.
Ao Tsopi, tanàna ambanivohitr'i Zeorziana akaikin'ny sisintanin'i Armenia, vondrona mpianatra vitsy miisa 80 no miara-mianatra amin'ny sekoly rava iray tsy misy rano na herinaratra. Na dia toa tsy mahazatra aza ny toe-javatra tahaka izany any amin'ny faritra sasany amin'izao tontolo izao, mety hahagaga anao ireo mpianatra, izay foko Azeri sy Armeniana. Fantatry ny Armeniana ny fiteny Azerbaijani ary mahay teny Armeniana ny Azeris. Taorian'ny ady sy fankahalana an-taonany maro, toa toy ny haitraitra sarotra tanterahina ho an'ireo vondrona roa ireo ny fiarahana-monina.
Ny zava-misy hoe mbola misy ny zoro hafa eto amin'izao tontolo izao izay ahafahan'ny vondrona ara-poko roa manana tantara marobe afaka mifandray sy miara-monina am-pilaminana ary mamela toerana ho an'ny fanantenana, hevitra izay miharihary amin'ireo fanehoan-kevitra amin'ny lahatsoratra ao amin'ny Transitions Online.
Mandritra izany fotoana izany, bilaogera Azerbaijani sady mpanadihady ara-paritra, Arzu Geybullayeva, naneho hevitra ihany koa momba ny dingana farany.
Mety ho tosika tanteraka amin'ny fananganana fifanakalozan-kevitra eo amin'ireo firenena roa tonta sy ny vahoakany izany, tsy lazaina intsony angamba ny fiandohan'ny fifamatorana mafy. Asehon'ireny dia natao ireny fa azo tontosaina ny fiarahamiaina amin'ny ezaka sy finiavana hanatanteraka fiarahamiasa sy fiaraha-miana izany. Angamba fotoana tokony hampiatoana ny fampiasana ny ady NK ho fanaovana adivarotra sy hanakana ny fitomboan'ny fankalahana eo amin'ny vahoaka roa tonta izao, manolo izany amin'ny hetsika maro kokoa toy izany.
David Brewer, mpampiofana momba ny media vaovao, mpanao gazety matihanina, sady tonian-dahatsoratra antserasera teo aloha sady mpanolotsaina ho an'ny BBC, CNN ary Al Jazeera, nilaza fa ohatra iray amin'ny anjara asan'ny feo hafa an-tserasera afaka mandeha ao amin'ny faritra ny tetikasa.
Ny tetikasa an-tserasera, miara-mitondra media vaovao sy media sosialy, dia mikendry ny hampivelatra ny fifankahazoana eo amin'ireo vondrona ara-poko manerana an'i Kaokazy Atsimo.
Ny sasany amin'ireo fampahalalam-baovao mahazatra dia mankasitraka ny fijery omen'ny hetsika toy izany. Richard Sambrook, talen'ny BBC Global News, nilaza fa mandray andraikitra sarobidy ny bilaogera.
“Manome varavarana lehibe misokatra tsy tapaka ho an'ny fijery mahaleotena eo amin'ny fiarahamonina na ny politika ny media sosialy. Afaka manapa-kevitra ho azy ny olom-pirenena mikasika ny fomba fijerin'ny olona sy ny toetrany – tsy miankina amin'ny tetipanorona ara-politika na ara-barotra.”
Amin'ny andro sy herinandro ho avy, dia hisy ohatra maro hafa mampiasa fitaovana fampahalalam-baovao sy tambajotra sosialy sy tantara, saripika ary lahatsary ho fanohizana ny fampiasana fohy miampita sisintany atao amin'ny volana Septambra. Araho ao amin'ny Twitter @caucasusproject izany.